श्रीमान् तीन बर्ष देखि साउदी अरेवियामा प’सि’ना ब’गा’उँदै, बाग्लुङमा श्रीमती ग’र्भव’ती ! यसरी खुल्यो पो’ल – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/श्रीमान् तीन बर्ष देखि साउदी अरेवियामा प’सि’ना ब’गा’उँदै, बाग्लुङमा श्रीमती ग’र्भव’ती ! यसरी खुल्यो पो’ल
श्रीमान् तीन बर्ष देखि साउदी अरेवियामा काम गर्दैछन् । पछिल्लो अस’ह’ज समयका कारण उनको घर फर्कने मिति अझै निश्चित छैन ।
तर श्रीमतिको यहाँ घरमा भने ग’र्भव’ती भएकी छिन् । कसरी भइन् भनेर खो’ज खबर हुँदा अनौठो तथ्य बाहिर आएको छ ।
ग’र्भव’ती भएपछि फा ‘लेको आ’रो’पमा बागलुङको जैमिनी नगर पालिकाबाट ती युवती प’क्राउ परेकी छन् । जैमिनी–१० की २६ वर्षीया युवती माथि चार महिनाको भ्रू’ण प’ त’न गरेर बा रीमागा ‘डेको आ’रो’प लागेको हो ।
ग’र्भ’वती भएपछि ती महिलाले औ’षधि सेव’ नगरेकी थिइन् । उनले चार महिनाको पुरुषभ्रू ‘ण ज’न्माई घरदेखि ५० मिटर टाढा बा रीमा गा ‘डे को अ’वस्थामा भे’टिएको थियो । घ’ट’ना सार्वजनिक भए पछि प’क्रा’उ गरी अनुस’न्धान थालिएको प्रहरी नायब उपरी’क्षक इकवाल हवारीले बताए ।
‘शनिबार दिउँसो स्थानीय वासीले देखेपछि प्र’हरी चौ’कीमा खबर गर्नुभयो, त्यहाँ प्रहरी पुग्दा रातो टा लोमा भ्रू’ण राखेरगा’ डेको अवस्थामा थियो’, हवारीले भने, ‘स्थानीय वासीकै आ’श’ङ्काका आ’धारमा हामीले उनलाई प’क्राउ गरेका हौँ’ । ती महिलाका श्रीमान् तीन वर्षदेखि रोजगा’रीको सिलसिलामा साउदी अ’रेबियामा छन् ।
केही दिनदेखि असामा’न्य व्यवहार देखाए पछि छिमेकीले उनको निग’रानी गरेका थिए । घ’टना गरेर घरमै बसेकी उनलाई प्रह’रीले शनिबार राति नै सदरमुकाम ल्याएको छ । उनको स्वा’स्थ्य परीक्ष’ण गरेर थप अ’नुस’न्धान थालिने हवारीले बताए । ग’र्भव’ती भए भन्ने विष’य खुलेको छैन । यो खबर साभार गरियको हो । प्रतिका’त्मक तस्विर